Cabdi Xaashi oo ka horyimid go'aanka dowladda ee doorashada - Tilmaan Media
Cabdi Xaashi oo ka horyimid go’aanka dowladda ee doorashada
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kasoo horseestay go’aanka ay shalay dawladda Soomaaliya ku shaacisay inay ku qabanayso doorashada.
Raysal wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya oo garab taagan yihiin qaarkamid ah madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in xukuumaddu dhawaan bilaabi doonto qabashada doorashada iyadoo aan la sugi doonin dowlad goboleedyada aan raaliga ka ahayn.
Ugu horreyn Cabdi Xaashi ayaa nasiib darro ku tilmaamay go’aanka xukuumadda ee qabashada doorashada, iyada oo aan weli xal rasmi ah laga gaarin doorashooyinka, gaar ahaan guddiyadeeda iyo arrinta gobolka Gedo oo ay isku hayaan dowladda & Jubaland.
Sidoo kale guddoomiyaha golaha aqalka sare ayaa ka digay cawaaqib xumo ka dhalan karta, haddii la qabto doorasho aan hehsiis lagu wada aheyn.
“Wa nasiib darro weyn oo xukumaddu ku dhawaaqday in dalku doorasho galayo, iyadoo aan wali wax xal ah laga gaadhin tabashooyinka laga keenay guddiyada doorashada lagu muransan yahay, doorashada xildhibaanada ka soo jeeda gobollada Waqooyi, khilaafka ka taagan gobolka Gedo iyo arrimaha kale ee la xidhiida maamulka iyo habraacyada loo marayo doorasho laysku waafaqsan yahay oo dalka oo dhan isku mar ka dhacda,” ayuu yiri.
Waxaan caddaynw sida ay dalka qayb kamid ah ay doorasho uga qabsoomi karto halka qaybo kalana aysan ka dhacayn. Aqoon yahan iyo wax garad badan baa ka digay in xukuumaddu ay ka dhabayso go,aanka ay shalay ku dhawaaqdday.
Ahmed Madoobe oo kahadlay go,aan ka dowladda ee qabashada doorashada
Baasaboorka Soomaaliya oo kagalay 106 liiska baasaboorada caalamka